Abavelisi be-ZTE ONU | China ZTE ONU Umzi mveliso kunye nabaxhasi
ZTE F601 GPON Isiphelo ONT
I-EchoLife HG8546M, isinxibelelanisi senethiwekhi esibonakalayo (i-ONT), sisango eliphezulu lesango lasekhaya kwisisombululo seHuawei FTTH. Ngokusebenzisa itekhnoloji ye-GPON, ukufikelela kububanzi be-Broadband kubonelelwa abasebenzisi bekhaya nabaseSOHO. I-H8546M ibonelela ngamachweba e-1 * e-POTS, 1 * GE + 3FE auto-adapting Ethernet port, kunye ne-2 * Wi-Fi port. I-H8546M inezinto eziphezulu zokuhambisa phambili ukuqinisekisa amava afanelekileyo ngeVoIP, i-Intanethi kunye neenkonzo zevidiyo ze-HD. Ke ngoko, i-H8546M ibonelela ngesisombululo sesiphelo kunye nenkxaso yexesha elizayo yokuxhasa ukuhanjiswa kwe-FTTH.
I-ZTE F660 V5.2 inguqulelo yamanye amazwe ONT
I-ZTE ZXHN F660 V5.2 FTTH yiGPON Optical Network Terminal eyenzelwe imeko ye-FTTH. Inika ababhalisi abazizityebi, abemibalabala, abazimeleyo, abasebenza lula kwaye bekhululekile kumdlalo wokudlala kathathu kubandakanya ilizwi, ividiyo (IPTV / CATV) kunye nesantya esiphezulu sokufikelela kwi-intanethi. ixhasa ukufakwa kwe desktop, ukunyuka kodonga kunye nokufakwa kwikhabhinethi yenethiwekhi. Le modeli yenzelwe iimeko ze-FTTH. Ngeteknoloji yayo yesango lasekhaya, i-ZTE F609 FTTH imele iziko elitsha lenethiwekhi yasekhaya elihlangabezana neemfuno zoncedo olupheleleyo lwabasebenzisi abaphezulu ngokuhambisa isantya esiphezulu se-Intanethi, ilizwi elikumgangatho ophezulu kunye nevidiyo (IPTV), ukufikelela okungenazingcingo ngaphandle kwamacingo iinkonzo zokugcina uthungelwano ezifanelekileyo.
I-ZTE F660 V6.0 GPON ONU 1GE + 3FE + IIPOTI + iWIFI
I-F660 V6.0 ibonelela ngamazibuko e-1 e-POT, i-1GE kunye ne-3FE yokulungisa ngokuzenzekelayo amazibuko e-Ethernet, izibuko elinye le-USB, kunye nezibuko elinye le-Wi-Fi. Ngokusebenzisa itekhnoloji ye-GPON, ukufikelela kububanzi be-Broadband kubonelelwa abasebenzisi bekhaya nabaseSOHO. I-F660 inezinto eziphambili zokuhambisa phambili ukuqinisekisa amava amahle ngeVoIP, i-Intanethi kunye neenkonzo zevidiyo ze-HD.
ZTE ONU F660 v8.0 1GE + 3FE + Iimbiza + USB + WiFi (5dibi)
I-ZTE GPON ONU ZXA10 F660 Inguqulelo 8.0 FTTO okanye i-FTTH ONT ene-1GE + 3FE + 1POTS + USB + WIFI.
I-Firmware yesiNgesi, i-QIG yesiNgesi, uphawu lwesiNgesi lwe-LED, iProtocol ye-SIP VOIP, kunye
Umsebenzi we-DHCP, ukuxhasa abasebenzisi abaninzi.
I-ZXA10 F660 yiGPON Optical Network Terminal eyenzelwe i-HGU (Icandelo leSango laseKhaya)
isetyenziswe kwimeko ye-FTTH, exhasa umsebenzi we-L3 ukunceda umrhumi ukwakha ikhaya elinengqondo
inethiwekhi. Inika umrhumo ngezityebi, ezimibalabala, ezizimeleyo, ezilungele kwaye zikhululekile
iinkonzo zokudlala kathathu kubandakanya ilizwi, ividiyo (IPTV) kunye nokufikelela kwi-intanethi ngesantya esiphezulu. Kwakhona
ixhasa IEEE 802.11b / g / n evumela umrhumisi ukuba onwabele i-intanethi nge-wifi. Inencinci,
ukubonakala okuhle kunye nokuluhlaza, inzuzo yokonga amandla. Sebenzisa umthetho olandelwayo we-OMCI, iindleko ze-O & M
inokuncitshiswa ngokufanelekileyo ngokuxhasa ukubonelelwa ngeenkonzo ezikude, ukuxilongwa kwesiphene okrelekrele
kunye nemisebenzi yokusebenza kweenkcukacha-manani.
1.Plug-and-play (PnP): Iinkonzo ze-Intanethi, i-IPTV kunye neVoIP zinokusasazwa ngonqakrazo olunye kwi-NMS kunye nokucwangciswa kwesiza akufuneki.
Ukujonga i-3.Link: Ukufunyanwa kwekhonkco kwe-E2E kufezekiswa kusetyenziswa i-802.1ag Ethernet OAM.
Ukuhamba ngesantya esiphezulu: ukuhanjiswa komgangatho we-GE kwinqanaba lokuvala kunye ne-900 Mbit / s yokudlulisela kwimeko ye-NAT.
5.Ulondolozo lwamandla eluhlaza: 25% yokusetyenziswa kwamandla kugcinwa ngenkqubo edityaniswe kakhulu kwisisombululo se-chipset (SOC), apho chip enye idityaniswa neemodyuli ze-PON, ilizwi, isango kunye neemodyuli ze-LSW.
ZTE gpon ont F663NV3A GPON ONT izixhobo zothotho zenziwa kwaye zaphuhliswa yinkampani ye-zte, eyinkokeli kwicandelo lothungelwano lwebhendi ye-FTTH / FTTO. Zilawulwa ngokufanelekileyo zongezwa ngeempawu ezinje nge-bandwidth ephezulu, ukuthembeka okuphezulu, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi kunye nokwanelisa iimfuno zabasebenzisi zokufikelela kubanzi, ilizwi, idatha kunye nevidiyo njl.
I-ZTE GPON ONU F663NV3A ene-1GE + 3FEports + 1 * izibuko zefowuni + i-wifi, enee-eriyali ezimbini ezifumana inzuzo engenazingcingo
ZTE GPON ONU 4FE + 2POTS + WIFI ONU
I-ZTE ZXHN F660 V5 GPON ONU NE-4FE + 2POTS + WIFI yeRouter ZTE F660 yiGPON Optical Network Terminal eyenzelwe imeko ye-FTTH. Ixhasa umsebenzi we-L3 ukunceda umrhumeli ukuba akhe inethiwekhi yasekhaya ekrelekrele.
Inikezela ngeenkonzo ezityebileyo, ezimibalabala, ezizodwa, eziluncedo kunye nezitofotofo kubandakanya ilizwi, ividiyo (IPTV) kunye nesantya esiphezulu sokufikelela kwi-intanethi.
I-ZTE GPON ONU F670L 4GE + Iimbiza + ezimbini zebhendi yeWIFI
I-ZXHN F670L yi-ITU-T G.984 kunye ne-ITU-T G.988 ehambelana nesiphelo senethiwekhi (ONT) eyilelwe abasebenzisi abasekhaya abaphezulu. Ifanelekile kwifayibha ekhayeni (FTTH) kwaye ixhasa idesktop ukunyuka.
Kwicala lenethiwekhi, ixhasa i-2.488 Gbps ezantsi kunye ne-1.244 Gbps uplink. Kwicala lomsebenzisi, ibonelela ngamazibuko amane e-GE, IPOTS enye
amazibuko, izibuko elinye le-USB 2.0, kunye ne-Wi-Fi 802.11n 2 × 2 2.4GHz kunye ne-802.11ac 3 × 3 5GHz ngaxeshanye. Ngokusebenzisa i-ZXHN F670, abasebenzisi basekhaya banakho
fikelela kwidatha, ividiyo kunye neenkonzo zezwi, kwaye wonwabele uqhagamshelo olukhawulezayo lwe-intanethi.
Ixabiso leHuawei Olt, Imodyuli yeFiber Optical, IHuawei Qsfp +, I-Sfp C ++, Ukudluliselwa kweModyuli yangaphandle, Umthumeli weXfp,